PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-11-04 - Kumsizile ukusheshe azimele owokhozi FM
Kumsizile ukusheshe azimele owokhozi FM
Ilanga langeSonto - 2018-11-04 - Izindaba - ZOWAKHA MBATHA
USIBONAKALISO Sithole wokhozi FM, owaziwa ngelikasbo Fokol, uthi nakuba kungazange kube lula ukungena kulesi sikhondlakhondla somsakazo kodwa namuhla konke sekumhambela kahle.
Usbo, ongowokudabuka egreytown kodwa osezinze esoweto, egoli, uthi nendlela akhule ngayo ibe nomkhulu umthelela kwayikho namuhla njengoba ekhuliswe nguninakhulu, waphinde wakhuliswa nguyise ongamzali.
“Ngesikhathi ngifika egoli okunye bekumele ngizizamele ngoba ngingahlali nobaba ongizalayo engize ngazana naye sengikhulile. Nanamuhla kasikaze sisondelane naye kangangokuba noma sekudlule umama emhlabeni ngo-2008 u- step father wami akazange angilahle.ukuzimela kungisizile njengoba kunezinhlelo engizenzayo ukuzikhulisa ngale nje kwengikwenza emsakazweni,” usho kanje.
Ngaphambi kokungena okhozini FM wayesebenzele isiteshi somphakathi, ithetha FM (Vaal Community Radio), angene kuyo emuva kokuphothula idiploma in Media Studies.
Uthi kumsizile kakhulu lokho njengoba manje eseyitechnical Producer yolunye lwezinhlelo ezigqamile okhozini FM, indiza Nathi, olwenziwa ngusbu nomroza Buthelezi.
“Emsakazweni womphakathi kulindele- kile ukwenza amaphutha okungafanele uwenze emsakazweni omkhulu. Kuba nzima uma usafika ngoba usuke ufana nomuntu ongenalutho esandleni ekubeni kulindeleke ukuba wenzele abathize ama- favour, abanye befuna ukufeza izinhloso zabo ngawe. Ngiyafisa ngelinye ilanga ngithole ithuba lokusakaza uhlelo olukhulu okhozini ukuze ngikhule ngolwazi, mhlawumbe ngigcine sengifinyelela ezingeni lokuphatha,” usho kanje.
Kulesi siteshi useke wahlomula ngendondo yebest Afternoon Drive Show kumamtn Radio Awards ngo-2012 no-13.
Nohlelo alwenzayo kuyimanje lomculo we- hip hop, inamba Namba, luke lwahlomula ngendondo yebest Radio Show kumasouth African Hip Hop Awards ngo2016. Ngale kokusebenza okhozini, uzovela engudj ohlelweni, i-one Mic, KUSABC 1, oluzoqala maduze kanti abanye bamazi ngelebuli yakhe yezimpahla IS-FOKOL.
Uphinde abe nezinhlelo azenzayo zokuthuthukisa abasembonini ye- hip hop, abasafufusa ngokubatholela izinkontileka zokuqopha namasentshana.
Ebuzwa ngezidubedube eziqhubeka kulo msakazo nokuthi zibathinta kanjani, uvele waqhephuka ngohleko, wayivala ngokuthi: “Sibuthebelele thina, angazi-ke noma kwenza ukuthi simbalwa yini lapha egoli, akukho ukuthi kuzoke kuhlanganwe emaphaseji kube nezinguyazana.”
USBO Fokol wokhozi FM.